ကွန်ဒိုများ ငှားရန်အတွက် တွင် မြန်မာ - 306 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
တွင် မြန်မာ ငှားရန်အတွက် ကွန်ဒိုများ
・FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 306 ကွန်ဒိုများ
Virtual 3D tours of မြန်မာ ကွန်ဒိုများ
Turn on this filter to only view ကွန်ဒိုများ with 3D virtual tours!
2 2.5 1,157 စတုရန်းပေ
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at Khayae Residence
တောင်ပေါ် ရှူ့ခင်း မြို့ ရှူ့ခင်း ရေချိုးကန် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော မီးဖိုချောင် ရေချိုးခန်း အဝတ်လျော်စက် တီဗီ
Minimum Rental Duration: အနည်းဆုံး ၁ နှစ်
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for Sale or Rent in Yangon
1 1 1,080 စတုရန်းပေ
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at 1 Bedroom Apartment for rent in Yangon
1 Bedroom Condo for rent in Lanmadaw, Yangon
1 1 750 စတုရန်းပေ
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at 1 Bedroom Condo for rent in Lanmadaw, Yangon
Don't miss out! Get notified when new ကွန်ဒိုများ are listed တွင် မြန်မာ
2 Bedroom Apartment for rent in Pazundaung, Yangon
ပုဇွန်တောင်, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
221,550 စတုရန်းပေ
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at2Bedroom Apartment for rent in Pazundaung, Yangon
ဒဂုံ, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Condo for rent in Dagon, Yangon
322,100 စတုရန်းပေ
321,250 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Apartment for rent in Thingangyun, Yangon
VIP members get access to exclusive prices for ကွန်ဒိုများ တွင် မြန်မာ
3 Bedroom Apartment for rent in Sanchaung, Yangon
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Apartment for rent in Sanchaung, Yangon
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at2Bedroom Condo for rent in Sanchaung, Yangon
Make an offer directly to the owner ofaကွန်ဒို တွင် မြန်မာ
3 Bedroom Apartment for rent in Yangon
333,220 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for rent at3Bedroom Apartment for rent in Yangon
1 - 30 ၏ 306 အဖြေများ
သင့်အတွက် 305 ကွန်ဒိုများ
ငှားရမ်းခြင်း :5သိန်း - 146 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 15 သိန်း
67ရိယာ ၆၇၆,၅၇၈ စတုရန်းကီလိုမီတာအကျယ်အဝန်းရှိပြီးBurmaရိယာအကျယ်အ ၀ န်းမှာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးသောသမိုင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်တစ်ချိန်ကအာရှ၏အင်အားအကောင်းဆုံးတိုင်းပြည်များ (ပုဂံနိုင်ငံတော်) ၏မူလနေရာတွင်တည်ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဗြိတိသျှအင်ပါယာကကိုလိုနီခေတ်တွင်ဂျပန်နှင့်မဟာမိတ်တပ်များ၏စစ်မြေပြင်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၄၈ တွင်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ အထိစစ်အစိုးရဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကိစ္စရပ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီးတိုင်းပြည်သည်ဒီမိုကရေစီသို့ကူးပြောင်းနေပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေပြီးလူကြိုက်များသောခရီးသွား destination ည့်သည်များဖြစ်လာသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့်ပုဂံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်နိုင်ငံတကာမှ visitors ည့်သည်များသည်များသောအားဖြင့်လာရောက်လေ့ရှိကြသည်။ ယူနက်စကိုမှစာရင်းပြုထားသောရှေးဟောင်းမြို့တော်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံသည်မထိရသေးသောတောတွင်းများ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ကမ်းခြေများနှင့်နှင်းဖုံးနေသောတောင်များများရှိသည်ဟုလူအများမသိကြပါ။
မြန်မာ တွင် ငှားရမ်းနိုင်သော အိမ်များအတွက် လစဉ်ငှားရမ်းခ အလယ်အလတ်သည် 17 သိန်း ဖြစ်သည်။ The median monthly rent per square feet in မြန်မာ is0သိန်း ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာ တွင် 271 အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန် ရရှိနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဟောင်းရန်ကုန် (ယခင်ကရန်ကုန်ဟုလူသိများခဲ့သော) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏လူကြိုက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးလေဆိပ်နှင့်တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးအချက်အချာနေရာဖြစ်သည်။ ဤလှပသောမြို့တော်သည်ရွှေတိဂုံစေတီတော်၊ မီတာ ၁၀၀ အမြင့်ရှိသောရွှေစေတီငယ်ရှိပြီးတောင်ငယ်ထိပ်တွင်တည်ရှိပြီးမြို့၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ ဤဘုရားသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးအပါဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာ ၀ င်နေရာဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်အပြင်ရန်ကုန်သည်အရှေ့တောင်အာရှရှိကိုလိုနီခေတ်ကာလအဆောက်အအုံများအများဆုံးနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ မြို့၏အခြားလူကြိုက်များသည့်နေရာတစ်ခုမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစျေးဖြစ်သည်။ ဤစျေးကွက်သည်လက်မှုပညာနှင့်အနုပညာမှရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာများအထိရောင်းချသည်။
ရန်ကုန် မှလွဲ၍ လူအများစုတို့သည် ၉ ရာစုနှင့် ၁၃ ရာစုနှစ်များအတွင်းအင်အားကြီးပုဂံနိုင်ငံတော်၏မြို့တော်ဖြစ်သောရှေးဟောင်းပုဂံမြို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။ gloryရာဝတီမြစ်ဘေးရှိပုဂံဝန်းကျင်ရှိထင်ရှားသောနေ့ရက်များတွင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယနေ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်စေတီတော် ၂၀၀၀ ခန့်သာကျန်ရှိတော့သည်။ များပြားလှသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကြောင့်၎င်းတို့အား limited ည့်သည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာခရီးသွား as ည့်အနေဖြင့်လာရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကံအားလျော်စွာ visitors ည့်သည်များသည်ကား၊ စက်ဘီး၊ သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ အသုံးပြု၍ exploreရိယာကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်နှင့်မျက်လုံးပြူးသောဘုရားများထံရပ်နားခွင့်ရှိသည်။ Bag ည့်သည်များသည်ပုဂံနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ငှက်၏မျက်လုံးအမြင်ရရန်ပူသောလေပူဖောင်းပေါ်တွင်ပျံသန်းနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိကွန်ဒိုမီနီယံအားအကြမ်းအားဖြင့်အနည်းဆုံးထပ်ဆင့် (၆) ထပ်ပါ ၀ င်သောစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သည့်မြေပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပြီးကွန်ဒိုမီနီယံဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားသောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကွန်ဒိုမီနီယံဥပဒေသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိကွန်ဒိုအများစုမှာအသစ်စက်စက်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဈေးကွက်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားသားများနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမြန်မာလူမျိုးများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပျှမ်းမျှကွန်ဒိုအရွယ်အစားမှာ ၁၁၈.၆ စတုရန်းမီတာရှိပြီးအိပ်ခန်း ၂.၅ ခန်းရှိသည်။ အကြီးဆုံးမှာပုံမှန်အားဖြင့် ၂၁၃.၂ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ ယူနစ်အမျိုးအစားအရတိုင်းပြည်အတွင်းရှိကွန်ဒိုများသည်စတူဒီယိုကွန်ဒိုများနှင့်အိပ်ခန်းတစ်ခန်းမှသုံးခန်းကွန်ဒိုများအကြားရှိသည်။ အချို့သောအထက်တန်းကွန်ဒိုများသည်ငှားရမ်းသူများအတွက်အဝတ်အစားများသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန်အပိုသိုလှောင်ခန်းများပင်ပေးသည်။
နိုင်ငံတွင်းရှိကွန်ဒိုများသည်အငှားချသူများအတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အိမ်ရှေ့တံခါးဝတွင်လုံခြုံရေးအစောင့်များ၊ CCTV များနှင့်ကဒ်သို့မဟုတ်လက်ဗွေသော့ခတ်စနစ်များအပါအ ၀ င်အားကစားရုံများ၊ ရေကူးကန်များ၊ ကလေးကစားကွင်းများ၊ ကွန်ဒိုအချို့ကိုရောထွေးအသုံးပြုထားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ငှားရမ်းသူများသည်သူတို့၏အောက်ရှိစားသောက်ဆိုင်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ကဖေးများနှင့်ရုံးအဆောက်အအုံများရှိသည်။
ကွန်ဒို အရွယ်အစား လစဉ် ပျမ်းမျှငှားရမ်းခ 1 အိပ်ခန်း (55 ကွန်ဒိုများကြည့်ပါ) 18 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (91 ကွန်ဒိုများကြည့်ပါ) 19 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (78 ကွန်ဒိုများကြည့်ပါ) 24 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (32 ကွန်ဒိုများကြည့်ပါ) 36 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (8 ကွန်ဒိုများကြည့်ပါ) 45 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်လူနေမှုစရိတ်လည်းမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့တိုင်နိုင်ငံခြားသားအများစုသည်ငွေကြေးပမာဏသိသိသာသာလျော့နည်းစွာဖြင့်သက်သောင့်သက်သာနေထိုင်နိုင်ပြီးတိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်မှုစရိတ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနိမ့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ် ဦး တစ်ယောက်သည်သက်သောင့်သက်သာနေထိုင်ရန်အနည်းဆုံးတစ်ဒေါ်လာ ၁၄၀၀ လိုအပ်ပြီးမိသားစုလေးယောက်၏မိသားစုသည်ဒေါ်လာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ လိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဝင်ငွေကြေးမှာမြန်မာကျပ်ငွေနှင့်ကျပ် ၁,၃၆၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းအထူးသဖြင့်အဓိကမြို့ကြီးများတွင် ATM စက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်ငွေသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဘုရင်ဖြစ်နေသော်လည်းလူအများစုသည်အရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အရဆုံးသောငွေတောင်းခံလွှာများကိုသာလက်ခံမည်ကိုသတိပြုပါ။ အချို့သောခရီးသွားareasရိယာများတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလက်ခံသည်။ သို့သော်နိုင်ငံခြားသားများသည်သူတို့၏ဒေါ်လာငွေတောင်းခံလွှာများသည်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဘာသာမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၉၀% ခန့်ကထေရ ၀ ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်တိုင်းပြည်၏ဘဝကဏ္ every အားလုံးနီးပါး၊ ၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု၊ လူနေမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်လောကဝတ်များမှထင်ရှားသည်။ အခြားဘာသာတရားများဖြစ်သောအစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ၀ ိရဂရနဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်အန္တိမန္တာန်များအားကျန်လူ ဦး ရေ၏ ၁၀% ကကျင့်သုံးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရုံးသုံးနှင့်ရုံးသုံးအများဆုံးဘာသာစကားမှာဗမာဖြစ်သည်။ လူများစွာသည်အထူးသဖြင့်အဓိကခရီးသွားareasရိယာများတွင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနှင့် / သို့မဟုတ်နားလည်နိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများသည်မြန်မာပြည်သို့မပြန်မီဘုံစကားစုအချို့ကိုလေ့လာရန်အကြံပြုလိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကာလရှည်ကြာနေထိုင်ရန်သို့မဟုတ်နေထိုင်ရန်နိုင်ငံခြားသားများသည်တည်းခိုခွင့်နှင့် Multiple Journey Special Re-entry Visa လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးလမှတစ်နှစ်အထိထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ၀ င်ခွင့်တစ်ခုတည်းအတွက်သာသက်ဆိုင်သောကြောင့်နိုင်ငံခြားသားများသည်ထိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်စဉ်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာ။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုပါကခရီးသွားအထူးအထူးပြန်လည်ဝင်ရောက်သည့်ဗီဇာမျိုးစုံလိုအပ်လိမ့်မည်။
305 ကွန်ဒိုများ ရရှိနိုင်သော
1 ကွန်ဒို ရရှိနိုင်သော